Ngokunjalo iNomad Sport Band imitya eluhlaza kunye nengwevu yeApple Watch | Ndisuka kuMac
UJordi Gimenez | | Izixhobo, Apple Watch
Ngokungathandabuzekiyo, ezona zixhobo ziphumeleleyo phakathi kwabasebenzisi be-Apple Watch zizitya kwaye kule meko UNomad yenye yeefemu ekufuneka sizithathele ingqalelo Ngexesha sijonga iindaba ngokudibeneyo ne-Apple Watch Series 7.
Ifemu yaseCalifornia ayiphoxeki kwaye iqalise ngemodeli entsha imitya emitsha yewotshi yeApple, okanye kunoko, imibala emitsha. Le mibala ihambelana ngokufanelekileyo nemibala emitsha yewotshi kwaye kule meko iimodeli zeNomad Sport Band zibonelela iDune entsha, iAshh Green kunye neMarine Blue igqityiwe ukuze i-Apple Watch yakho ibonakale inomtsalane.
1 Uyilo lwe-Nomad luthetha uyilo olumangalisayo
2 Intuthuzelo yale mitya ikhohlakele
3 Izinto zokwakha ezikumgangatho ophezulu kunye nezixhathisayo
Uyilo lwe-Nomad luthetha uyilo olumangalisayo
Kwaye yile modeli ye Nomad Sport Band umtya Sele ifumaneka kwivenkile yefemu kangangexesha elithile kwaye ibetha ngokwenene nabasebenzisi be-Apple Watch. Inoyilo oluhle olunokuvalwa okukhuselekileyo okuhambelana nokuvalwa komgangatho osetyenziswa yiApple ngokwayo.
Ewe kunjalo, asinakuthi iimveliso zikaNomad ziyilwe kakubi, zonke ziqinisekisa abasebenzisi kwaye zikwenza ufune ukuthenga iimveliso zabo. Bajongana kakhulu kulo mba kodwa nakwi umgangatho wezinto ezisetyenziselwa ukwenziwa kwazo.
Intuthuzelo yale mitya ikhohlakele
Oku akusiyo imveliso ephantsi kwaye oku kubonakala xa uyisebenzisa ixesha elide. Kwimifanekiso onayo kweli nqaku, i-Sport Band Lunar Grey strap sele isetyenziswe ixesha elide. Ezi ntambo zi ikhululekile kakhulu ukuyisebenzisa kwimihla ngemihla okanye umsebenzi womzimba walo naluphi na uhlobo.
Ukubekwa kwabo banikezela ngokuvalwa okutofotofo ngokwenene ukuze basebenzise. Akunzima ukubamba i-Apple Watch kwindawo engenakukhanya kuba ukuvalwa kufana nje naleyo isetyenziswa kwimitya ye-silicone ye-Apple kodwa ithe tye. Sinokuthi oku kuvalwa kokona kukhululekileyo ukubeka iwotshi kwindawo yayo.
Izinto zokwakha ezikumgangatho ophezulu kunye nezixhathisayo
Njengoko besesitshilo ngasentla, izixhobo ezisetyenziswa nguNomad kwezi ntambo ze-Sport Band zifana nohlobo lwe-silicone kodwa zifana kakhulu nezo zisetyenziswa yi-Apple, ndingatsho nokuba imathiriyeli iyaxhathisa. Kule meko, ukuvalwa kunye nemingxuma emininzi esinayo kwi-strap ivumela ukulungeleka kakuhle kwisandla. Kuyinyani ukuba ngexabiso abanalo banokongeza inxalenye ende kunye nento emfutshane njengoko besenza kwi-Apple, kodwa kuyinyani ukuba imilinganiselo isemgangathweni kwaye awuyi kuba nangxaki yokulungelelanisa.
Ukuxhathisa kwezi ntambo kukhohlakele kwaye zinwebeka noko. Inyani yeyokuba ukuchasana nezinto kulunge kakhulu kwaye kwimeko apho kufuneka ucoce umbilo, udaka okanye izinto ezinjalo, usebenzisa nje amanzi zilungile njengoko zintsha. Ungasebenzisa isepha kodwa izinto ezenziwe ngazo ezi ntambo zibangela ukuba zingakhuphi ivumba elibi, ngoko ke ukuhlanjululwa kwamanzi kunokwaneleyo ukucoca.
Eyona nto ibaluleke kakhulu malunga nale mitya ye-Nomad kukugcina engqondweni ukuba ikumgangatho obalaseleyo kwaye ngoko ke ixabiso labo aliyi kuba lelomtya wokuxelisa onokuwufumana kuyo nayiphi na ivenkile ye-intanethi. I-Nomad ifana nomgangatho ophezulu kwaye ke amaxabiso ayo ayibizi kakhulu kwimarike, kodwa inokuthelekiswa nayo. iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye ubone ukuba zilungelelaniswe ngokwexabiso. Kule meko imitya ye-Nomad Sport Band ukuba ixabiso malunga 54 euro ukutshintsha.
Kwiwebhusayithi esemthethweni sincoma ukuba uthenge ukuba uhlala eUnited States, ukuba uhlala apha kungcono ukuba uhambe nge Iwebhusayithi yeMacnificos ukuba ngoku banazo ezinye iimodeli zokunikezelwa kwalo mtya. Ngokomzekelo, imodeli yeLunar Grey ye-Apple Watch ye-42, 44 okanye i-45 mm unokuba nayo nge-49,99 euro. Ukuba ufuna imodeli kumnyama kule milinganiselo ifanayo ungayifumana nge-34,99 euros olu lurhwebo lokwenene.
Umgangatho wezinto eziphathekayo
Uyilo olutsha kunye nemibala
Ukuvalwa okuqinileyo nokukhuselekileyo
Yongeza nje umlinganiselo womtya
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Ngokunjalo iNomad Sport Band imitya eluhlaza kunye nengwevu yeApple Watch
I-M1 Max GPU igqwesa ikhadi lemizobo le-Mac Pro ye-AMD Radeon Pro W6900X
Apple ikhupha itreyila yokuqala kaGqr. Brain mystery series